आँखाको मुनी देखिएको ‘डार्क सर्कल’ ले लज्जित हुनुभएको छ ? यसरी पाउनुहोस् मुक्ति – Khabaarpati
November 8, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on आँखाको मुनी देखिएको ‘डार्क सर्कल’ ले लज्जित हुनुभएको छ ? यसरी पाउनुहोस् मुक्ति
तपाईको आँखाको तल कालो घेरा पर्छ ? यदि पर्छ भने यस्ता कुराको बेवास्ता गर्नुभन्दा कारण पत्ता लगाई यसको समस्याबाट छुट्कारा पाउनुहोस् ।यस्तो नहोस् कि तपाईको बेवास्ताका कारण अनुहारको कालो दागले अनुहारलाई नबिगारोस् । कालो घेरा अनुहारका लागिमात्र होइन, स्वास्थ्यको लागि पनि खतरनाक हुन्छ ।
कालो घेरा धेरै कारणले हुनसक्छ । कहिलेकाहीँ धेरै तनाव लिनाले पनि आँखाको तल कालो घेरा पर्छ। यसको साथै कम सुत्नाले, हर्मोन बदलिनाले, सही जीवनशैली नहुनाले पनि आँखाको तल कालो घेरा बस्छ।
हुन त अहिले यस्ता समस्याको लागि बजारमा विभिन्नथरीका क्रिमहरु आएका छन् । तर तपाईको अनुहार संवेदनतशिल छ भने यस्ता उत्पादनले असर पनि पर्न सक्छ ।
चिसो टी ब्यागको प्रयोग गर्नाले पनि यस्ता समस्याबाट मुक्ति मिल्न सक्छ । टी ब्यागलाई केही समय पानीमा डुबाएर राख्नुहोस् र लगाउनुहोस् । चिसो दूधको लेपले पनि कालो घेरा हट्न सक्छ।सुन्तलाको बोक्रालाई घाममा सुकाएर पिस्नुहोस् । त्यो पाउडरलाई थोरै गुलाफ जल मिसाएर लगाउनाले पनि कालो घेरा हट्न मदत गर्छ ।
बिहानै गर्ने यी १० गल्तीले जवानीमै बूढो बनाइदिन्छ, बेलैमा चाउरीन्छ छाला
शरीरमा पानीको कमी हुँदा देखिन्छ यस्तो खतरनाक चिज, समयमै ध्यान दिनुहोस् नत्र…
January 10, 2021 January 10, 2021 goodmam